भोली अत्यन्तै पवित्र हरिशयनी एकादशी, यस्तो कार्य गरे मिल्नेछ लाभ ! - Sidha News
काठमाडौं। एकादशी विशेष, हरिशयनी एकादशी किन मनाउनेर ? यत्त एकादशीमा पुजा गर्दा के कस्तो फल मिल्छरु आउनुहोस युवा ज्योतिष केशव गौतमबाट जानकारी लिऔँ । आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन भगवन नारायण शेषशैयामा शयन गर्नुहुन्छ । कार्तिकशुक्ल एकादशीमा शोषशैयाबाट भगवन नारायण जाग्नुहुन्छ।
जान्नुहोस् यो तिथिमा के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्दैन।
के–के गर्दा अचुक फाईदा ?
यो दिन पूजन पाठले सबै झन्जट, दुख कष्ट हटेर जानेछन् । सबै प्रकारका मोहपनि हटेर जानेछन् । यसैले मनमा शान्ति छाउनेछ । यो दिन व्रत जरुर बस्नुहोस्।
ब्रत बस्ने व्यक्ति बिहानै उड्नुपर्नेछ । स्नान पछि सूर्यलाई जल चढाउनुहोस् । भगवान विष्णुका अगाडी पुगेर व्रत बस्ने संकल्प गर्नुहोस् । दिनभर निराहार व्रत बस्नुहोस् । संभव छैन भने फलाहार खाएर व्रत बस्नुहोस् । साँझ भगवान विष्णु र देवी लक्ष्मीको विधि–विधानले पूजा गर्नुहोस्।
एकादशीको दिन बिहानै तुलसीको बृक्ष रहेको मोडमा जल चढाउनुहोस् । साँझ तुलसीको नजिक शुद्ध घिउको दीप जलाउनुहोस् । तुलसी परिक्रमा गर्नुहोस्।
एकादशीमा भगवान विष्णुलाई खीर, पहेलो फल या पहेलो रंगको मिठाईको भोग लगाउनुहोस् । यस दिन दक्षिणावर्ती शंखमा गंगाजल भरेर त्यसले भगवान विष्णुलाई अभिषेक गर्नु अति शुभ मानिन्छ । तपाई चाहानुहुन्छ भने दूध र केसर मिलाएर भगवान विष्णुको अभिषेक गर्नुपर्नेछ।
कुनै मन्दिरमा गएर अन्न (गहूँ, चामल आदि) को दान गर्नुहोस् । भगवान विष्णुलाई पीतांबरधारी पनि भनेर सम्झिने गरिन्छ । यसैले एकादशीमा उहाँलाई पहेलो वस्त्र अर्पित गर्दा फल मिल्नेछ । भगवान विष्णुलाई तुलसीको माला चढाउनु अति उपयुक्त हुनेछ।
एकादशीमा क्रोध, रिस त्याग्नुपर्नेछ। घरमा कुनै प्रकारको वाद–विवाद या क्लेश राख्नबाट बच्नुपर्नेछ। व्रत बस्ने व्यक्तिले ईमानदारी पूर्वक काम गर्नुपर्नेछ । बिहान अबेरसम्म सुत्नुहुन्न। कुनै प्रकारको नशा सेवन गर्नुभएन।